I-Samsung's Smart Monitor ene-AirPlay 2 kunye ne-Apple TV + ngoku efumanekayo eSpain | Ndisuka mac
I-Samsung's Smart Monitor ene-AirPlay 2 kunye ne-Apple TV + ngoku efumanekayo eSpain
Isamsung yaziswa ekupheleni konyaka i Ismart yokujonga esweniUkubeka iliso, njengoko igama lalo lisenza ukuba siqonde, ayisiyiyo iliso eliqhelekileyo, kodwa liliso elibukhali, kuba lisinika izinto ezifanayo nezoomabonakude I-AirPlay 2 kunye nokusetyenziswa kweenkonzo ezithandwayo zokuhambisa ividiyo.
Uninzi lwabantu abaze kusebenza emakhayeni abo, kwaye olu luhlu lutsha lokubeka iliso lufanelekile, kuba lusivumela ukuba sisebenze / sifunde kwaye sizonwabise ngesixhobo esinye. Eli liliso lifumaneka ngobukhulu obubini, Sele ikhona eSpain ukusuka kwi-249 euro.
I-Samsung Smart Monitor entsha isinika izinto ezimbini ezisebenzayo. Kwelinye icala sifumana ithuba lokudibanisa kuso nasiphi na isixhobo kwaye kwelinye icala, liziko elifanelekileyo lokuzonwabisa Idlalwe 2 inkxaso.
Ukongeza, idibanisa ukufikelela kwiinkonzo eziphambili zevidiyo, iinkonzo esinokuzisebenzisa ngokuzimeleyo ngaphandle kweMac yethu kunye ivumela ukuba sisebenzise iMicrosoft Office, okoko nje sinokubhaliselwa kweOfisi 365.
1 Iimodeli zokujonga iiSamsung zeSamsung
1.1 Ukubeka iliso kwi-Smart M7
1.2 Ukubeka iliso kwi-Smart M5
2 Iimpawu zeSamsung Smart Monitors
Iimodeli zokujonga iiSamsung zeSamsung
Ukubeka iliso kwi-Smart M7
Oku kubeka esweni I-intshi ezingama-32 zisinika isisombululo se-UHD (3.840 × 2.160), iyenza ilungele ukusebenza ukongeza ukonwabela umxholo okhoyo kwi4K kumaqonga evidiyo ahlukeneyo. Ixabiso lale modeli 399 euro.
Ukuba ubucinga ngokuhlaziya esweni esindala, ngexabiso elinalo kunye nezibonelelo ezisinika zona, lukhetho olunomdla kakhulu kufuneka ugcine engqondweni.
Ukubeka iliso kwi-Smart M5
Le modeli ifumaneka kwiinguqulelo ze I-intshi ezingama-27 kunye nama-32 ngesisombululo se-FullHD (1920 × 1.080). Ixabiso le I-289 i-euro yemodeli ye-intshi ye-32 nge I-249 i-euro yemodeli ye-intshi ye-27.
Iimpawu zeSamsung Smart Monitors
I-Smart Monitor M7 yi-HDR10 ehambelana nayo, ibandakanya amazibuko amabini e-HDMI 2.0, uqhagamshelo lwe-USB-C (65W ukutshaja), iWi-Fi 5, iBluetooth 4.2, kunye namazibuko amathathu e-USB 2.0. Kubandakanya i- ulawulo LWERIMOTHI kwaye icandelo leziko le-multimedia lilawulwa yiTizen 5.5.
I-Smart Monitor M5 ibandakanya amazibuko amabini e-HDMI 2.0, amazibuko ama-2 e-USB 2.0, ayibandakanyi izibuko le-USB-C kodwa ukuba iWi-Fi 5, iBluetooth 4.2, irimowthi kunye neTizen 5.5 njengeziko lemultimedia.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » I-Samsung's Smart Monitor ene-AirPlay 2 kunye ne-Apple TV + ngoku efumanekayo eSpain
Abahlalutyi baqikelela ukuba kule veki izayo siza kuba nengxelo entsha yengeniso yekota
Usomajukujuku. Le yindlela ebizwa ngayo isiqendu sesibini soMkhonzi